Caasimadaha Muqdisho iyo Ankara oo la mataaneynayo kadib markii heshiis la saxiixay – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
1.In la is-waydaarsado khibradda dhanka maareynta iyo hannaanka fulinta isbedellada qorshaynta magaalooyinka, guryaha iyo gaadiidka dadweynaha, ilaalinta deegaanka, dhaqaalaha, sayniska iyo dalxiiska.
2.In la xoojiyo iskaashiga labada magaalo, iyadoo loo marayo martigalinta dhacdooyinka iyo bandhigyada ku saabsan arrimaha dhallinyarada, dhaqanka iyo hiddaha, tababarrada xirfadaha iyo ciyaaraha.
3.Dhiiri gelinta iyo hirgelinta dhammaan qorsheyaasha iyo mashaariicda ku qotama kor u qaadidda horumarinta guud ee labada magaalo.
4.Waaxda Maamulka Dawladda Hoose ee Muqdisho iyo Waaxda Xiriirka Dibadda ee Dawladda Hoose ee Ankara ayaa u xil saaran joogteynta xiriirika iyo isku-dubaridka shaqooyinka labada magaalo, iyagoo wakiil uga ah dawladahooda.